स्मार्ट र प्रिय बुहारी कसरी बन्ने ? १० टिप्स – Jagaran Nepal
स्मार्ट र प्रिय बुहारी कसरी बन्ने ? १० टिप्स
के म मेरो पति र परिवारलाई खुसी राख्न सक्छु ? याे अक्सर नव-दुलहीको मनमा उठ्ने प्रश्न र यो स्वभाविक पनि हो। परिवारलाई कसरी स्वस्थ्य र खुसी राख्ने भन्ने कुरा उनैमा भर पर्छ। जब बुहारी बनेर अर्को घरमा प्रवेश गरिन्छ, सबै कुरा नौला हुन्छन्। परिवारका सदस्य, त्यहाँको वस्तुस्थिती, परिवारको रहनसहन, बानी व्यवहार, चालचलन भिन्न हुनसक्छ।
अर्थात आफु हुर्किएको पारिवारिक वातावरणसँग मेल नखान सक्छ। यस्तो अवस्थामा हरेक नव-दुलहीले आफुलाई फरक परिवेश, फरक रहनसहन, फरक व्यक्तिहरुमाझ समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिरन सजिलो र छरितो लगाउनुपर्छ। यद्यपी बुहारी भएपछि पुरानो ढर्राको हुनुपर्छ भन्ने छैन। परिवारको रहनसहन बुझेर आफुलाई त्यही अनुरुप प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ।
कतिपय बुहारी यस्ता पनि हुन्छन्, जसले परिवारले मान्दै आएको संस्कार अंगाल्न चाहँदैनन्। यसले परिवारमा कलह हुन्छ। तर, कति बुहारी यस्ता हुन्छन्, जसले परिवारलाई थप सुमधुर र बलियो बनाउने भूमिका निर्वाह गर्छन्। नव दुलही बनेर जुन घरमा भित्रिएको हो, सुरुवाती दिनहरुमा त्यो घर बिरानो लाग्नसक्छ।
त्यहाँको चालचलनमा अभ्यस्त हुन गाह्रो हुनसक्छ। यद्यपी, त्यो घरको साँचो त्यही बुहारीकै हातमा आउने हो र उनैले सम्हाल्ने हो। परिवारलाई कसरी स्वस्थ्य र खुसी राख्ने भन्ने कुरा उनैमा भर पर्छ। यहि मानसिकता बनाएर घर परिवारलाई सकेसम्म राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुपर्छ।
– सबैभन्दा पहिला सासु र ससुरालाई आफ्नै आमाबुवा सम्झनुपर्छ । आमाबुवालाई जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ । देवर, नन्दलाई भाइ-बहिनीको जस्तै प्रेम गर्ने, मार्गदर्शन दिने । अरु सबैप्रति प्रेमपूर्वक समान व्यवहार गर्नुपर्छ।
– तपाईको पतिसँग घरको सबै जिम्मेवारी हुन्छ। यदि तपाईको लागि समय निकाल्न सकेनन् भने रिसाउने वा गलत सोच्ने नगरौ । आखिर पतिले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन तपाईसँग विताउने हो । पति को समस्या, भावना, जिम्मेवारीलाई बुझ्नुहोस्।
– यदि तपाई पतिसँग बाहिर घुम्न जानुभएको छ भने घरका सदस्यहरुका निम्ति केहि न केहि कोसेली ल्याइदिनुहोस्, यसले परिवारप्रति तपाईको समर्पण कति छ भन्ने कुरा देखाउँछ।
– एउटै छानोमुनी बसेपछि कहिले कहि ठाकठुक पर्छ, मनमुटाव हुन्छ। परिवारका सदस्यहरु आपसमा रिसाउन, झगडा गर्न सक्छन् । तर, यस्तो कुरा अर्कोलाई सुनाउने नगरौ। एउटाको कुरा अर्कोलाई सुनाउने प्रवृत्ति पनि राम्रो होइन । यसले तपाईप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ ।
– यदि तपाई खाना बनाउन सिपालु हुनुहुन्छ भने, यहि माध्यामबाट परिवारको मन जित्न सक्नुहुन्छ। उनीहरुलाई मन पर्ने खाना तयार गर्नुहोस् । त्यस्तै घरको सरसफाई, सजावटमा पनि तपाईको कला देखाउनुहोस्।
– पहिरन सजिलो र छरितो लगाउनुपर्छ। यद्यपी बुहारी भएपछि पुरानो ढर्राको हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाई पनि आफुलाई फेसनेवल देखाउन सक्नुहुनेछ। यद्यपी त्यो भड्किलो र नसुहाउने हुनुहुँदैन। यस्तो पहिरन लगाउनुहोस्, जसले तपाईलाई शालिन, शुसिल देखियोस्।
– घरलाई सुखी र खुसी राख्ने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्नुहोस्। सहि समयमा खाना पकाउने, ख्वाउने गर्नुहोस्।